Diniho ny handao an'i Chad izao
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'i Chad » Diniho ny handao an'i Chad izao
Chad dia mety ho lasa iray amin'ireo firenena tsara tarehy indrindra eto Afrika notsidihina, miaraka amin'ireo zava-manintona ara-kolotsaina izay tsy ananan'ny olon-kafa manerantany. Na izany aza, ny filaminana no antony lehibe indrindra hitazomana an'i Chad hitokana amin'ny mpitsidika.
Chad dia afaka nametraka fetra fitsangatsanganana sy manakana ireo fantsom-pifandraisana ary nanoro hevitra ny amin'ny tsy hisian'ny dia ao anatin'ny firenena ivelan'ny renivohitra N'Djamena.
Chas dia mety manana endrika vaovao amin'ny fizahan-tany manerantany, fa ny filaminana kosa dia mampiato ny fivoarana rehetra toy izany.
Ny Departemantam-panjakana amerikana dia nandidy ny fialan'ny mpiasan'ny governemanta amerikana tsy misy vonjy maika avy ao an-drenivohitr'i Chad, N'Djamena, ao anatin'ny korontana sivily ary mety hisy ny fandrahonana herisetra mitam-piadiana, hoy ny masoivoho amerikanina ao Chad.
Araka ny filazan'ny Dr. Peter Tarlow, lohan'ny Fizahantany azo antoka kokoa ary ny mpiara-mitarika ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, Chad dia niasa tamin'ny fandefasana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Chad dia manana fotoana tsy manam-paharoa ary hitondra endrika kolontsaina manintona amin'ny fizahan-tany manerantany.
Amin'izao fotoana izao, ny mpanolotsaina avy any Espana dia ao amin'ny renivohitra N'Djamena handrafitra ny safidy hanokafana ity indostrian'ny mpitsidika ity ho an'ny firenena. Safertourism dia niasa tamin'ny fanombanana.
Ny fiarovana sy ny filaminana kosa dia mbola olana lehibe ao Chad,
“Ireo vondrona tsy miankina mitam-piadiana any avaratr'i Chad dia nifindra nianatsimo ary toa nihazo ny N'Djamena. Noho ny fahatongavan'izy ireo akaiky an'i N'Djamena, sy ny mety hisian'ny herisetra ao an-tanàna, ireo mpiasan'ny governemanta amerikana tsy dia ilaina dia nodidiana handao an'i Chad amin'ny kaompaniam-barotra. Ny olom-pirenena amerikana ao Chad maniry hiala dia tokony hanararaotra ny sidina ara-barotra ”, hoy ny fanambarana.
Tamin'ny sabotsy, nilaza ny Tafiky ny Chad fa "nanimba tanteraka" andiana mpikomy nanafika ny firenena tamin'ny andro fifidianana ny filoha tamin'ny herinandro lasa teo.
Raha ny filazan'ny mpanao gazety AFP dia nisy fiara mifono vy efatra sy miaramila maromaro nalefa teo amin'ny fidirana avaratry N'Djamena ny sabotsy hariva, izay nanohizan'ny fiaran'ny miaramila ny ady.
Herinandro lasa izay, mpikambana ao amin'ny vondrona mpikomy monina ao Libya Force for Change and Concord in Chad (FACT), dia nilaza fa nisambotra toby miaramila akaikin'ny sisin-tany avaratry Chad miaraka amin'i Niger sy Libya "tsy misy fanoherana".
Malaza ratsy amin'ny asa fampihorohoroana sy fifindra-monina tsy ara-dalàna i Chad. Tamin'ny 2014, nandefa ny Operation Barkhane tao Sahel i Frantsa. Chad dia any amin'ny faritra Sahel.
Operation Barkhane Izy io dia tanterahina miaraka amin'ny herin'ny tafika G5 Sahel izay misy an'i Mali, Burkina Faso, Chad, Niger, ary Mauritania.